कोरोना भाइरसबाट अत्यन्त प्रभावित देशहरु कुन-कुन हुन् ? - Pura Samachar
कोरोना भाइरसबाट अत्यन्त प्रभावित देशहरु कुन-कुन हुन् ?
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको संख्या ७७ लाख ८० हजार नाघेको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय बिहीबार जानकारी दिएको छ ।
कोरोना सङक्रमणबाट अमेरिकामा मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या दुई लाख १६ हजार नाघेको छ । केही दिनअघिबाट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प दुवैलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको छ । यद्यपी राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भएको जनाइएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणको कारण दोस्रो स्थानमा रहेको अर्थात विश्वकै दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको देश भारतमा कोरोनाबाट ६८ लाख ३५ हजार सङ्क्रमित भएका र यस सङ्क्रमणबाट एक लाख ५ हजार ५५४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणलाई हेर्दा तेस्रो स्थानमा रहेको देश ब्राजिलमा सङ्क्रमितको संख्या ५० लाख नाघेको छ । सङ्क्रमणको कारण एक लाख ४८ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।
कोलम्बियामा ८ लाख ७७ हजार ६८३ जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका छन् भने २७ हजार १८० जनाको मृत्यु भएको छ । स्पेनमा ८ लाख ७२ हजार २७६ व्यक्ति कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका छन् भन ३२ हजार ५६२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अर्जेन्टिना ८ लाख ४० व्यक्ति कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका छन् भने २२ हजार २२६ जनाको मृत्यु भएको छ । पेरुमा ८ लाख ३५ हजार ६६२ मा व्यक्ति कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका छन् भने ३३ हजार ९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
मेक्सिकोमा ७ लाख ३९ हजार १८८ व्यक्ति कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका छन् भने ८२ हजार ७२६ जनाको मृत्यु भएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा ६ लाख ८५ हजार १५५ व्यक्ति कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका छन् भने १७ हजार २४८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बिहीबारसम्म १० लाख ६१ हजार ७७९ जना पुगेको छ । यस भाइरसबाट सङक्रमित हुनेको संख्या विश्वभर तीन करोड ६४ लाख ७० हजार पुगेको छ । कूल सङ्क्रमितमध्ये दुई करोड ७४ लाख ५३ हजार भन्दा बढी हजार निको छन् भने करिब ७९ लाख ५४ हजार मानिस सक्रिय सङ्क्रमित छन् । विश्वभर अझै पनि ६७ हजार भन्दा बढी मानिसको स्वास्थ्य अवस्था निकै जटिल रहेको छ ।